ဘယ် media playerကောင်းလဲ — MYSTERY ZILLION
ဘယ် media playerကောင်းလဲ
December 2008 edited October 2009 in Web Base
ဘလော့မှာ သီချင်းတွေ ထည့်ချင်လို့။ ဘယ် player က loading လုပ်တာမြန်လဲဲဆိုတာ သိချင်တယ်။ imeem က သိချင်းတွေကို embedded လုပ်တာ တော်တော်နဲ့ မတက်ဘူး။ ဘန်းကျော်ကနေဆို နားထောင်လို့ မရဘူး။ ဘယ်online streaming player သုံးရမလဲဟင်။ :39:
ဆိုတဲ့ web site တစ်ခုတော့ တွေ့တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ streaming ကို မသုံးဘူးဗျ။ Player နဲ့ သီချင်း file အတူတူရောနေတာကိုသုံးတယ်။ ကျွန်တော် သုံးထားတာကို
မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဆင်ပြေရင် ကျွန်တော် သုံးတဲ့ software ကို
mp3 တွေ သိမ်းတဲ့ဆိုက်ကတော့ imeem က ကောင်းပေမယ့် player ကတော့ ဒါလေး ကောင်းတယ်ဗျ။ မြန်မြန်တက်တယ်။ အသံကြည်တယ်။ (မူရင်းကောင်းဖို့ လိုရင်း) နှစ်ခု မျှသုံးရင် အတော်ကောင်းတယ်။ ဒီမှာ နမူနာကြည့်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း၊ အဲဒါ။ \_:D/
ကျွန်တော်ကတော့ အောက်ကကုဒ်လေးကိုသုံးတယ်ဗျ။ ဥပမာလေးပြထားပါတယ်။
[html]<object id="MediaPlayer1" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" width="100" height="100" type="application/x-oleobject">
<param value="http://www.url.de/videos/video.avi"; name="URL"/>
<param value="0" name="ShowControls"/>
<embed border="0" width="320" src="mms://streamserv.myanmarmp3.net/mmp3/stream/Male/Zaw%20Win%20Htut/Shin%20Than%20Chin/13.Than%20Tha%20Yar%20Sann%20Yay.wma" height="304" type="application/x-mplayer2"/></embed>
code နဲ့ဖော်ပြထားတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ထည့်ချင်တဲ့သီချင်း url ထည့်ရင်ရပါတယ်ဗျ။ ထည့်ချင်တဲ့သီချင်း url က ကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်ဗျ ဝိုင်းဝိုင်းရဲ့ htawara ဆိုတဲ့သီချင်းဆိုရင် http://yourdomain.com/htawara.mp3 အဲလိုဖြစ်ရမယ်ဗျ။
စမ်းချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ကကုဒ်လေးကို Notepad ထဲထည့်ပြီး mozilla ထဲထည့်ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။
တစ်ခါတည်း ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အဆင့်လေးတွေကိုပြောပြသွားမယ်ဗျ။ ကျွန်တော်သီချင်းတင်ချင်ရင် pages.google.com ကနေသီချင်းတစ်ပုဒ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးရင် အဲဒီurl လေးယူပြီးတော့ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းလင့်ခ်လေးကိုအစားထိုးလိုက်ပါတယ်။ ကုဒ်လေးကိုရှုစားတော်မှုပါ။
<embed border="0" width="320" src="http://nyameeeain21286.googlepages.com/mae_lite.mp3"; height="304" type="application/x-mplayer2"/></embed>
[code] အဆင်ပြေရင် ကျွန်တော် သုံးတဲ့ software ကို
Yeah! Please share me your software and also tell me how to use it.
Thanks Nyamee and Uranus! I will test all of your methods. Let's see what will happen.
ကျနော်က သီချင်းတွေကို ဘေးက ဆိုက်ဘားမှာ ထည့်ချင်တာလေ။
ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ code နဲ့ရတယ်လေ ကိုလဂျမ်းရ Layout==>Page Element==>Add Gadget==>HTML/JAVA SCRIPT အဲဒါလေးကိုထဲမှာ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကုဒ်ကိုထည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဗျ။ စမ်းကြည့်ပါဦးအစ်ကို ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာတော့ရတယ်။
အဆင်ပြေတယ်အကို... တော်တော်မြန်တယ်..နော်..အကိုသုံးထားတဲ့ဟာလေးကို Upload တင်ပေးပြီးတော့...
step by step လေးရှင်းပြပေးပါဗျား.. ကျွှန်တော် ဘလော့မှာထည့်ချင်လို့ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အကို pages.google.com က ပိတ်ထားတော. ဘယ်ဆိုဒ်မှာ တင်လို. ရသေးလဲ။ တင်ပြီး လင်.ပြန်ပေးတဲ. ဆိုဒ်တစ်ခု ကိုညွန်ပေးပါနော်။:77:
ကျွန်တော်က တော့ ဆိုဒ်ရဲ့ဘေးမှာ.ကိုယ်စိတ်ကြိုက်သီချင်းလေးတွေထည့်တာတော့ ထည့်တက်သေးဘူးဗျ.. အဖြူရောင်သံစဉ် ရေဒီယို အစီအစဉ်လေး ကို ပဲ ထည့်သုံးထားပါ.တယ်.အဲဒါလေးလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်...သီချင်းကောင်းလေးတွေလည်း.၂၄ နာရီပတ်လုံး လာနေတာပါ။.. အဲဒီကုဒ်လေးတွေ လိုချင်ရင်တော့...
အဲဒါလေးကိုကောပီ ကူးပြီး ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ နေရာ မှာ ထည့်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ....
ကိုည ရေ... တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့.......ကျနော် hard disk ထဲ က သီချင်းတွေ...ဗွီဒီယို file တွေကို ရော local stream ဘယ်လို ထည့်ပြီး လုပ်မလည်းအကို ....သင်ပေးပါအကို ....:)